ezaposwa ngomhla 01 / 27 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Testosterone Enanthate. Ibe 12 Comments.
I-Formula ye-Molecular: C21H28O3
Isisindo somzimba: 400.59
I-Melt Point: 34-39 ℃
I-12 Impendulo Amazwana
URonald J Rapacciuolo10 / 23 / 2018 kwi-12: 33 ntambama
Ufuna ukuthenga i-100 gram yovavanyo E kunye ne-100 amagremu e-Deca kufuneka ukwazi ixabiso kunye nolwazi malunga nokuthumela igrama yemali. Okanye umyalelo wemali.
John Kramer10 / 22 / 2018 kwi-9: 11 ntambama
Unomdla ekuthengeni uvavanyo lwe-E, uvavanyo lwe-C kunye ne-Deca. Ndivile ukuba abantu baphephile kwaye banempilo. Nceda ubuyele kum.
UJeremy10 / 22 / 2018 kwi-4: 29 ntambama
Ufuna ukuthenga i-100 gram te powder. Entsha ukusebenzela. Njengomsebenzi woqhagamshelwano wandixelela ngale nto.
Dave09 / 14 / 2018 kwi-7: 36 ntambama
Ingakanani uvavanyo lwe-500mg ye-E powder kwaye ndithenga njani
UDkt Patrick Young09 / 02 / 2018 kwi-8: 59 ntambama
Kulungile, siya kuqhagamshelana nawe ngokukhawuleza.
Christopher09 / 01 / 2018 kwi-5: 37 ntambama
Ufuna ukuthenga i-100 gram yovavanyo E kunye ne-100 gram ye-Deca kufuneka ukwazi ixabiso kunye nolwazi malunga nokuthumela igrama yemali
UDkt Patrick Young08 / 01 / 2018 kwi-9: 56 ntambama
Kulungile, siya kufumana nawe
URobert Buchel08 / 01 / 2018 kwi-2: 13 ntambama
Molo apho. Ingakanani i-100 grams ye-Testosterone Enanthate iza kundibiza? Kwaye iindleko zithunyelwa njani eNetherlands?
UDkt Patrick Young07 / 10 / 2018 kwi-8: 50 ntambama
Haitham A07 / 10 / 2018 kwi-12: 53 ntambama
Yintoni eya kuba yindleko yokuthenga i-25 grams ye-Enanthate yoVavanyo, eya ku-Ontario, Canada
Edward Corlett06 / 24 / 2018 kwi-5: 55 ntambama
Ngaba ndiyakwenza oku eCanada
Homer simpson04 / 05 / 2018 kwi-8: 14 ntambama
Hayi ndifuna uvavanyo e. Kwimeko yase-washington ungayifumana apha?
Isikhokelo esicwangcisiweyo kwiTestosterone propionate powder evela	Umthombo wemvelo we-Orlistat powder ukulahleka kwesisindo-I-fat loss loss drug ifanele uyazi !!!